IBM OpenDX: chinoshandiswa kuona sainzi data | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Graphics, Linux software
IBM yakagadzira iyi software inonakidza iwe yaungangodaro usina kuziva nezvayo, asi izvo zvinogona kukubatsira kufungidzira data resainzi zvakajeka. Anonzi OpenDX (Vhura Dhata eXplorer) uye ine rezinesi pasi peIBM Ruzhinji Rezinesi. Uye zvakare, inowanikwa yeGNU / Linux, uye iwe unogona kuiwana munzvimbo yepamutemo repos yemamwe ma distros, kana muzvitoro zveapp kuti uiise zviri nyore.
Unogona bata nzvimbo dzakaomarara,, Idzi idzi dhata dzinogona kuve scalar (senge kusunganidzwa kwemakemikari zvinhu), vector kana kunetsekana minda (senge kutama, ...) kunzvimbo dzakasiyana dzechinhu.
Idzo poindi dzinoyerwa iyi data haifanirwe kunge yakaenzana zvakapatsanurwa, dzinogona kunge dzisina kuenzana. Chero zvazvingaitika, iyo OpenDX inobuda ichave 3D mifananidzo ine mavara-akanyorwa kana machena machena, kana maveji, mitsara yekuyerera, nezvimwe. Iyo inototsigira zvikamu zvekucheka kuti zvirinani kuongorora, kutenderera zvinhu kupa iyo data kuona kubva kune chero kona, inomutsa pakufamba, uye zvimwe.
Iyo graphical interface ine akateedzana e mashandiro ekudyidzana nawo. Semuenzaniso, unogona kushandura zvakananga mifananidzo inogadzirwa nekuswededza, kutenderera, nezvimwe. Uye iwe unogona zvakare kushandisa zvimwe zvisina kunangana mabasa nemabhatani, dials, nezvimwe, kudzora maficha ekuratidzira.
Uye zvakare, iri nyore, uye inobvumidza kuwana mhedzisiro mu ingori nhanho nhatu dziri nyore: tsananguro uye kupinza iyo data ichagadziriswa (vanogona kuuya kubva kwakasiyana masosi), kugadzirisa data kuburikidza nekuona, uye kuratidzwa kwemhedzisiro muchimiro chemufananidzo.
Kunyangwe iyi application iri yechinyakare, ini ndaida kukuratidza, nekuti ichiri kushandiswa. Uye, pasina kupokana, ndeimwewo alternativa kune mamwe mapurogiramu akafanana neGID, Paraview, MayaVi, DataMelt, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » IBM OpenDX: chinoshandiswa kugona kuona data